Banijya News | बजार उच्च भएको समय शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? सबै गुमाउनु पर्ला नि ! - Banijya News बजार उच्च भएको समय शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? सबै गुमाउनु पर्ला नि ! - Banijya News
बजार उच्च भएको समय शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? सबै गुमाउनु पर्ला नि !